Wasaaradda Ciyaaraha Somaliland Oo Ka Hadashay Garoomada Gaarka Loo Leeyahay
HomeAfricaWararka GudahaWasaaradda Ciyaaraha Somaliland Oo Ka Hadashay Garoomada Gaarka Loo Leeyahay
Hargeysa (www.cadalool.com) – Wasaaradda ciyaaraha, dhallinyarada iyo dalxiiska Somaliland ayaa ka hadashay garoomada casriga ah ee gaarka loo leeyahay ee dalka ku soo badanaya, kuwaas oo ay maalgasheen isla markaana samaysteen dhallinyaro iskood u maalgeliyey.
Agaasimaha wasaaradda ciyaaraha, Maxamed Xuseen Dhabbeeye, ayaa sheegay in inta aan garoomadaas la furin ay cidda furanaysaa la socodsiiso wasaaradda ciyaaraha, isla markaana la siiyo ruqsad ogolaansho ah ka hor inta aan la bilaabin dhismaha garoonka.
“Way nala socodsiiyaan, oo waxa aanu siinnaa ogolaansho, goobta ay ka dhigayaanna waanu eegnaa. Waxa kale oo aanu siinaa warqad cashuur dhaaf ah oo runtii iyaga ayaa dhigta doogga” sidaas ayuu yidhi agaasimaha wasaaradda ciyaaraha.
Warkan oo uu qoray wargeyska Geeska Sport, ayaa waxa uu agaasimuhu muujiyey in ay dhiirigelinayaan dhallinyarada ku hawlan arrimaha ciyaaraha.
Qiimeynta kubadda cagta aduunka: Horyaalkee ugu wanaagsan caalamka.?
Video – Barcelona Garaacday Villarreal